डढेकै चिया बेचेर करोडपति ! छोरीको बिहेको दिनमा पनि चिया बेचिन् सुमित्राले (भिडियो सहित) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > डढेकै चिया बेचेर करोडपति ! छोरीको बिहेको दिनमा पनि चिया बेचिन् सुमित्राले (भिडियो सहित)
स्याङजामा घर भएपनि सुमित्रा शर्मा आफ्नो परिवार सहित पोखरामा बस्दै आएको २५ वर्ष भन्दा धेरै भैसकेको छ । चिया पसल संचालन गरेको नै १० वर्ष पुगेको छ । बिहान ५ बजेदेखि सुमित्राको ग्यास बल्न सुरु गर्छ राती अवेरसम्म ग्यासमा दुध पाकिरहेको हुन्छ । सुमित्रा शर्माको खाजाघरको नाम दिप फ्रेण्डसिप खाजा घर हो तर यो नामले कसैलेपनि चिन्दैनन् । पोखराको बजारमा डढेको चिया पाउने वा मिठो चिया पाउने ठाउँ भन्यो भने अधिकांशले चिनिहाल्छन् ।
उनकोमा चिया पिउन आउने अधिकांश सधै आईरहने ग्राहाक छन् वा भनौ न एक पटक सुमित्राको हातले पकाएको हातको चिया खाए पछि जो कोही फर्कि फर्की फर्की आउने गर्दछ । पोखरामा सुमित्राले बनाएको जस्तो चिया अन्यत्र नपाईने भएकाले सुमित्राको डढेको चियाले अहिले बजार पाईरहेको छ ।सुमित्रालाई बरु धेरैले याद नगर्लान् तर उनको डढेको चिया सम्झेर मानिसहरु फर्कि फर्कि आउछन् । हेर्नुहोस तिनै सुमित्रासंग हामीले गरेको यो कुराकानी भिडियोमा हेर्नुहाेस ।
नेपाल टुक्र्याउछु भन्ने सिके राउत बिरुद्ध खनिदै रमेश प्रसाईं, हरेक नेपालीको रगत उम्लिने भिडियो, सक्दो शेयर गरौ
को हुन मलेसियामा कुटाई खाने नेपाली सेकुरिटी आफैँ आए लाईभमा हेर्नुहोस (भिडियो)